ဒီနွေဦးမှာ – ၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » ဒီနွေဦးမှာ – ၁
ဒီနွေဦးမှာ – ၁
Posted by ムラカミ on May 8, 2013 in Cultures, History, Photography, Travel | 12 comments
Golden Week အတွင်း ခရီးထွက်ခဲ့တုန်း ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံတချို့ပါခည.. ပထမဆုံး ကျနော် နဂိုရွာ ကနေ နာရ လို့ ခေါ်တဲ့ ရှေးဟောင်းမြို့ကို သွားပါတယ်… ဒန်တန့်တန် … မိုင် ၁၀၀ ပျော့ပျော့ခရီး ကို ရထားစီးလို့ပေါ့…
Nara (奈良市 Nara-shi?) is the capital city of Nara Prefecture in the Kansai region of Japan. The city occupies the northern part of Nara Prefecture, directly bordering Kyoto Prefecture. Eight temples, shrines and ruins in Nara, specifically Tōdai-ji, Saidai-ji, Kōfuku-ji, Kasuga Shrine, Gangō-ji, Yakushi-ji, Tōshōdai-ji, and the Heijō Palace remain, together with Kasugayama Primeval Forest, collectively form “Historic Monuments of Ancient Nara”,aUNESCO World Heritage Site.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nara,_Nara ကျန်တာကတော့ ၀ီကီမှာ ဆက်ဖတ်ကြပါကုန် … ဘုရားကျောင်းတွေပေါတဲ့ ..သမင်တို့ရဲ့ မြို့မှာ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာက တော့
Kōfuku-ji In 784, Emperor Kammu decided to relocate the capital to Nagaoka-kyō in Yamashiro Province, followed by another move in 794 to Heian-kyō, marking the start of the Heian period. The temples in Nara remained powerful beyond the move of political capital, thus giving Naraasynonym of “Nanto” (meaning “South Capital”) as opposed to Heian-kyō, situated in the north. Close at the end of Heian period, Taira no Shigehira,ason of Taira no Kiyomori, was ordered by his father to depress the power of mainly Kōfuku-ji and Tōdai-ji, who were backing up an opposition group headed by Prince Mochihito. The movement has led intoacollision between the Taira and the Nara temples in 1180, when eventually Kōfuku-ji and Tōdai-ji were set on fire, resulting in the vast loss of its architectures.
အဲ့သည့်ကနေပြီး ကျနော် မိုင်၃၀လောက် အကွာက ကျိုတို မြို့ဟောင်းကို ဆက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်.. ၂ညအိပ် ၃ရက်ခရီး ဖြစ်လို့ အိပ်ရမယ့် ၂ညကို မြို့ကြီး ကျိုတိုထက် နယ်မြို့ ဖြစ်တဲ့ နာရ ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်.. မနက် ထ-ထပြီး မိုင်၃၀ ရထားစီးရသပေါ့လေ….
ပထမနေ့ ကတော့ သံ တချောင်းမှ မသုံးဘဲ တောင် ဇောင်းမှာ ဆောက်ထားတဲ့ Kiyomizu Dera နဲ့ ငွေကျောင်း Ginkaku ji တို့ ရောက်ခဲ့ပါရဲ့ ..
( ပိုနာမည်ကြီးတဲ့ ရွှေကျောင်းနဲ့ Niji-Jo တို့က အရင်နှစ်က ရောက်ခဲ့သမို့ ဒီတခါ ပြန်မသွားဖြစ်တော့ပါ ) (Gion လို့ခေါ်တဲ့ ဂေးရှား လမ်းတွေနဲ့
အရင်တခေါက်သွားခဲ့ပုံတွေ တင်ခဲ့ပြီး ..) ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပုံ တချို့ကတော့ ..
Monk @ Kiyomizu dera
နောက်ရက်ကတော့ ကျိုတို မြို့စွန် က Inari Fushimi Shrine ပေါ့ … တောင်တက်လမ်းမှာ သစ်သားတိုင်လုံးအနီတွေ သောင်းချီ ရှိတဲ့ နေရာပေါ့ …
Fushimi Inari Taisha (伏見稲荷大社?) is the head shrine of Inari, located in Fushimi-ku, Kyoto, Japan. The shrine sits at the base ofamountain also named Inari which is 233 metres above sea-level, and includes trails up the mountain to many smaller shrines. Since in early Japan Inari was seen as the patron of business, each of the Torii is donated byaJapanese business. First and foremost though, Inari is the god of rice. Merchants and manufacturers worship Inari for wealth. Donated torii lining footpaths are part of the scenic view.
အဲ့သည့်နောက်တော့ နဂိုရွာပဲ ပြန်လာနေလိုက်ပြီး ရုံး၃ရက် ပြန်တက်ရပါတယ် … ။ ဒီတခါသွားခဲ့တာက Kansai Region လို့ ခေါ်တဲ့
အနောက်ဘက်ခြမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံး ၃ရက်အပြီး မှာတော့ နောက်ထပ် ၄ရက်ထပ်ပိတ်လို့ ကျနော် Kanto လို့ခေါ်တဲ့ အရှေ့ပိုင်းဒေသကို သွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ေ
နာက်တပုဒ် ထပ်တင်ပါ့မယ်ဗျို့ …။
P.S 100% Made in Phone
ဗဟုသုတ ရသလို ဓါတ်ပုံတွေကလည်း ဂွတ်ပါပဲ ၊
၁ ရှို ဒေါ့ ၂ တွေ ၃ တွေ လာအုံးမှာပေါ့နော်
P.S 100% Made in Phone ဆိုတော့ အင်မတန်ထိရောက်တဲ့ ကြော်ငြာနည်းပဲ။
အိုင် ဖုန်း ဖိုက် ကြီးနဲ့ ရိုက်ခဲ့တာပေါ့လေ။
သုံးတတ်တဲ့ လူများကြလည်း ဆရာတစ်ပါးပေါ့။
သံတစ်ချောင်းမှ သုံးမထားတဲ့ အဆောက်အဦးတော့ ကြည့်ချင်သား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံး ၂ ပုံ အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ပေမယ့်ပုံလေးတွေအရမ်းကောင်းတယ်..ပန်းသီးခရေဇီဆိုတော့ ဖိုက်နဲ့ ရိုက်တာလို့ တော့ထင်သား..
မနက်စောစော ပိုစ့်ဖွင့်ကျိရင်း မာမား မေးထားတာ ဖြေမလို့ ကြံတုန်း မဈာယိ က ၀င်ဖြေသွားသမို့ ..
တကယ်က ကင်မလာ ထက် ကင်မလာကို မောင်းတဲ့ firmware က အသက်ဗျ….
တချို့ ကင်မလာဒွေ ဖစ်ဇစ်ကယ် သာပေမယ့် ရုပ်ထွက်မကောင်းတာ ဖစ်ဇစ်ကယ် အောက်ပေမယ့်
ရုပ်ထွက်သာတာ ..အနှီ အပျော့ထည် ပိုင်း ကွာလို့ဗျို့ …..
snapseed ပဲ သုံးနေဆဲပါ…
Artis ဆိုတဲ့ပုံလေး ခေါင်းတောင်လိုက်စောင်းကြည့်မိတယ်….
Ginkaku-j ကတော့ ပန်းချီပုံလေး နဲ့တူတယ်…
Signboard ဆိုတဲ့ ပုံကို Signboard ဖယ်ပြီးကြည့်ချင်လိုက်တာနော်…
သမင်တွေက မြို့ထဲ ဂလိုပဲ လျောက်သွားနေကြတာဗျ…
အဲ့သည့်မြို့မှာ သမင်သတ်စားရင် ထောင်ဒဏ်
ဒီတခေါက် သမင်ရိုက်မလာတာက နွေမို့ ပူလို့ …
သမင်တွေကိုအမွေးရိတ်ပေးထားကြတယ်..ကျိလို့ မလှဘု ..
(တဖက်ကလည်း သမင်မွေးနဲ့လုပ်တဲ့ အမှတ်တရပစ္စည်း လုပ်ရောင်းနိုင်သပေါ့)
နောက်ပြီး ကလေးတွေ အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ သမင်ထီးတွေ သိပ်ဂျိုကားလာပြီဆိုရင်
စနစ်တကျ ဖြတ်တောက်ကြတတ်သေးတယ်. (တနည်းသမင်ကိုသတ်ဖို့မလိုပဲ သမင်ဂျို
ပုံအကြောင်း ဆက်ပြောရရင် အဲ့ဒီ့ပုံက မထင်မှတ်ဘဲရိုက်ဖစ်သွားတဲ့ပုံပါ
သူရို့ဆီမလဲ ဆန္ဒပြပွဲ ရှိတယ်လေ… ဆန္ဒပြလို့ လမ်းပိတ်ထားတုန်း မြင်းကျားမရှိတဲ့နေရာကနေ
ဒါ့ပုံလေးတေ ကျိရတာ ဆွိ ဖစ်လိုက်တာ…
နောက်တပိုင်းကျ ဟက်ပီး မန်မရီ လေးတေ များများတင်ဘာနော် :harr:
မှတ်မိသလောက်.. သူတို့တွေအဲလိုပုံစံအတိုင်း.. အကြာကြီးးးးးးနေလို့ရတယ်..